Midowga musharixiinta madaxweynaha Somalia oo war ku saabsan doorashada u gudbiyey beesha caalamka.
January 12, 2021 Xuseen 2
Puntlandtimes (Garoowe)-Xubnaha Midowga Musharaxiinta Madaxweynaha Soomaaliya ayaa waxaa ay qoraal la xiriira muranka ka taagan arrimaah doorashooyinka Soomaaliya waxaa ay u direen Xubnaha Beesha Caalamka ee taageerada siiya Soomaaliya.
Qoraalka oo ku qoran luuqada English-ka ayaa waxaa ay ku sheegeen in xalka uu noqon karo in doorashooyinka lagu qabto hal Magaalo, sidoo kalena arrinta kuraasta soomaliland loo madax bannaaneeyo guddoomiyaha golaha Aqalka Sare cabdi Xaashi Cabdillaahi.
Sidoo kale Xubnaha Midowga Musharaxiinta Madaxweynaha ayaa waxaa ay sheegeen inay diyaariyeen Liiska xubnaha ay tahay in laga saaro Guddiga doorashada ee lagu muransan yahay maadaama dowladda ay dhowr jeer sheegtay iny u soo gudbiyaan.
Xubnaha Midowga Musharaxiinta Madaxweynaha Soomaaliya ayaa Muqdisho ku lahaa kulamo isdaba-joog ah tan iyo wixii ka dambeeyay markii Xukuumadda Soomaaliya ay ku dhawaaqday in la bilaabayo doorashooyin, isla markaana intaan ka badan aan waqtiga laga lumineyn Shacabka Soomaaliyeed.
Luqad aay lahayen bay xarxariiqeen wadanka
Somali baa lah leaders
Dalku waa uu layahay
Illaah baan idinku
Dharshaye xasan miyaan
Doranaa xasuusta nabarayso
Waakuma xasan aflayrshe
Ama qoslaaye hadba saad utakhaanaan ciidankii somali
Ayuu meel fagaaro ah uu
Kucanaantay haadii iidan
Raali 100$ guriga hoyadii
Aada ninkaas runtii nin liito
Iran iyo carabta isku dhacay
Xogaa lacag ah qaado oo
Xariga ujar iraan.aaway masiirkii umada somalia
Hadana asagoo og inaan larabin buu sotagna yahay
Waa unbuu nasiib waxa kuhalay
Lamana aqoon hada waan ku
Beesha lixaad RAJABEETO miyaa uyaka?!
Marka hore yaad matashaan idinku? Maamulladii kulligiin idin metelaayey kulligood doorashay aadayaan, waa Hir-shabeele & Gal-Muduge. Dheeshii ciyaalka ee ‘hide & seek’ waa laydinku fahmay. Waddanku doorashuu u dhaqaaqay intii markaa sii bilaabi kadha. Lammada kalena waa rajeynaynaa in ay hannaanka socda ee doorashooyinka ku soo biiraan.
Intaa waxaa dheer, haddii alle idmo, 8da Febraayo wixii ka danbeeya Farmaajo waa joogayaa xafiiska illaa la helo madaxweyne beddela ama usagaba dib loo soo doorto. Haddaba inta ka horayDa 8da Febraayo hawsha waa lasii dhaqaajinayaa, taas micnaheedu ma aha in laga maarmay labada maamul ee kale. Murashixiinta iyo murashaxa ra’iisal wasaare ee DENI baa isku milmay oo isku dan noqday, iyaga oo kaashanaya waddamo aan iyaga iyo dadkoodaba dan u hayn. Markii ay caqabaddaasi timi bay ka fursan weydey in intii isfahamsani ay hawsha sii dhaqaajiso.
Axmed Madoobe waa la fahmi karaa waxa uu ku doodayo inkasta oo aysan heshiiskii ku qornayn, laakiin DENI waa murashax la mawqif ah midawga murashixiinta. Diyaarna uma aha sida muuqata in midawga murashixiinta & Deni ay doorasho galaan, waayo ma hayaan kalsooni ay ugu babac dhigaan kooxda villada. Way isgarab yaacayaan oo uyaka laftigoodaa kala shakisan oo ma abaabulna.
Marka ay giraantu halkaa botorinayso, Xasan-Qabyo & Axmed-Marino, oo ah hormuudka hotel Jazeera, waxa ay go’aan ku gaareen in hawsha ay dhabqiyaan deedna iyada oo la iska lusho la gaarsiiyo 8da Febraayo, deedna la yiraahdo dawladdu madaxweyne malaha ee waa in labada aqal soo dhisaan xukuumad xil hayn ah oo waddanka doorasho galisa, sida uu waraysi ku bixiyey nin mar soo noqday wasiirka waxbarashada oo ka soo jeeda Beledweyne oo ka mid ah murashixiinta, waxaana magaciisa la yiraahdaa Dr. ABDI-NUUR SHEEKH MOHAMED.
Gunaanadkii, caqliga nimanka ku shira hotel Jazeera & maamulka Garoowe, waa aynu meesheeda ku hayno illaa 8da Febraayo, deedna aan niraahno madaxweyne waddanka kama jiro sida uu Cabdi-Nuur-ba waraysiga ku bixiyey. Kooxda villaduna doorashada in ay dhaqaaqday rabaan oo ila meeraysada laga daayo.
Haddaba, iyada oo uu xaalku sidaa yahay haddii 8da Febraayo la gaaro maxaa dhacaya? Ma sida kooxda hotel Jazeera ay ku doodaan baa dhacayda mise sidii horayba u dhacday ee ku xusan RULE NO. 20? Gari allay taqaannaa; waxa la raacayaa sunnihii hore Xasan-Qabyo u jideeyey ee ahayd madaxweynaha illaa mid kale beddelo ama uu usagu soo laabto usaga ayaa xilka sii haynaya. Caqabadda doorashaduna waa Garoowe iyo hotel Jazeera. Sidaa daraadeed, cidna kuma eedayn kadhaan doorashadii baa socon weydey idinka oo dabada haya.